महासंघकाे भूमिका राेजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत हुनुपर्छः शौरभ ज्योती – BikashNews
महासंघकाे भूमिका राेजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत हुनुपर्छः शौरभ ज्योती
२०७७ मंसिर १ गते ८:४५ विकासन्युज
नेपाल उद्योग वाणिज महासंघमा नेपाल युवा उद्यमी मञ्चको संस्थापक सदस्य हुँदै हाल बैंकिङ, बित्त तथा बीमा समिति सभापति रहेका सौरभ ज्योती एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी हुन् । व्यवसायिक घराना ज्योति समूहका निर्देशक ज्योतिले महासंघको भूमिका पुरा गर्न आफ्नो व्यवसायलाई भन्दा धेरै जोड दिनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
उनले पहिलो कार्यकालमै एसोसिएट उपाध्यक्षमा इच्छा देखाएका थिए । तर, विभिन्न परिस्थिति र “टिम स्प्रिड” का लागि उनले उक्त पद छाडेका थिए । एक प्रकारले उनलाई युवा नेता पनि भनिन्छ, तर पनि उनको कपाल फुलिसकेको छ ।
त्यसैले अहिले आफूले एशोसिएट्सको उपाध्यक्षमा दाबी गरेको ज्योतीको भनाई छ । यसमा “रिजल्ट” ल्याउने गरि काम गर्ने उनले बनाएका छन् । समग्र रुपमा अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता ज्योतीले जनाएका छन् । व्यापार व्यवसायको समृद्धिमा आफ्नो जोड रहने उनको भनाई छ ।
विज्ञसहितको प्रोफेसनल सचिवालय आजको आवश्यक्ता रहेको बताउने ज्योती अबको उद्देश्य रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । आर्थिक समृद्धि र सबै सदस्यको हक हीतका लागि लड्ने प्रतिबधता उनको छ । “तर यो विषयबाट महासंघ अलि बाहिर गइरहेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । अहिलेको मुद्दा नै राजनीति हुन्छ,” ज्योती भन्छन्, “को कुर्चीमा आउने ? कार्य समितिमा पनि छलफल हुँदा आधा कुरा त आन्तरिक राजनीतिकै हुन्छ । यो एकदम गलत छ ।”
महासंघ सचिवालय पनि तथ्य र तथ्यांकका आधारमा काम गर्न सक्ने किसिमले स्थापित गरिनु पर्ने ज्योतीको भनाई छ । यसका लागि पनि आफूहरुले टीमबाट महासंघको सुदृढीकरणको विषयमा सचिवालयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउँछन् ।
नतिजाउन्मुख काम गर्नका लागि महासंघलाई राजनीतिमुक्त बनाउँदै वस्तुनिष्ठ व्यावसायिक संस्था बनाउन ज्योतीले सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । नेपाल सरकारलाई उचित सल्लाह दिएर क्षेत्रगत रुपमा सामाजिक र राष्ट्रकै विकासमा ठूलो योगदान गर्ने निजी क्षेत्र भएकाले त्यो दिशामा जाने बाटो पनि नीजि क्षेत्रले नै बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ । “प्रोफेसनल संस्था बनाएर राजनीतिमुक्त संस्था बनाउने मेरो व्यक्तिगत सिद्धान्त र उद्देश्य हो,” ज्योती भन्छन्, “व्यक्तिगत भने पनि टिमको कुरा त आइहाल्छ । टिम पनि यही सोच भएका साथीहरु रहेको नै भएकाले हामीले महासंघमा परिवर्तन चाहेका छौं ।”
“नेता भएँ भनेर सबैले नमस्कार गरे भन्दैमा धाक देखाउने त होइन नि ? अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, सबैसँग झुकेर सबै साथीहरुको सेवामा लाग्ने हो भने धेरै काम त आफैं सम्पन्न हुन्छन् । त्यो नै वास्तविक नेतृत्व हो । र अहिले यसको खाँचो परेको छ,” ज्योती भन्छन् ।
साथीहरुलाई परेको समस्या र अफ्ठ्यारोको एजेण्डा बोकेर आगाडि बढ्ने र सम्बन्धित सरकारी निकाय, सम्बन्धित संघ–संस्थामा गएर समस्या समाधान गर्ने र महासंघको गरिमा अझै उच्च बनाउने उद्देश्यले आफू र आफ्नो टिम अघि बढिरहेको उनको भनाई छ । मतदाताले पनि यो विषय राम्रोसँग बुझ्नु भएकाले आफूहरु शसक्त रुपमा अघि बढिरहेको उनले बताए ।
निर्वाचन प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको बताउने ज्योती मतदाताले राम्रो मान्छे चिन्न सक्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् । व्यक्तिले जे भने पनि टीममा मिलेर काम गर्नु पर्ने र त्यो गर्ने क्षमता आफशुहरुको टीममा रहेको उनको बुझाई छ । आगामी अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधान, उपाध्यक्षहरुमा आफू र अन्जन श्रेष्ठको एउटा धार भएकाले पनि महासंघलाई अबका दिनमा बलियो बनाउन यो टीमलाई अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको उनको दाबी छ ।
एफएनसीसीआईसँग प्रोजेक्ट नै नभएको अवस्थामा प्रोजेक्ट ल्याएर महासंघको गरिमा उच्च बनाउन आफुहरु सबल रहेको बताउने ज्योती हरेक कामको प्रभावकारी कार्यान्वायनमा पनि टीमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।
यसमा आफनो प्रयास जारी रहेको र आगामी दिनमा त्यसलाई अझ बुलन्दीका साथ अघि बढाउने योजना ज्याेतीको छ । आत्मविश्वासी नेतृत्वको आवश्यक्ता औंल्याएका ज्योती व्यक्तिगत स्वार्थमा महासंघ आउनेहरुबाट नतिजा खेज्न नसकिनेमा आफू विश्यस्त रहेको बताउँछछन । यसका लागि अनुभव, लगनशीलता र टीमको विश्वास महत्वपूर्ण हुने उनको बुझाई छ ।